Gionee F9 Plus bụ onye ọrụ gọọmentị: mara atụmatụ ya na nkọwa ya | Gam akporosis
India bu oke ahia nke otutu ndi na emeputa ama na-abanye asọmpi di egwu nke na-ewere ebe ahu na nkwa di iche. Gionee bụ ama ama ama ama ama naanị maka ịsọ mpi na ngalaba a, ọ bụ ezie na ọ bụghị n'etiti na oke elu, mana, karịa ihe ọ bụla, na mmefu ego.
Gionee F9 Plus bụ ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ ahụ maka nnukwu mba Eshia. Emegoro nke a awa ole na ole gara aga, yana ọnụahịa nke ga-adọta ihe karịrị otu onye na-enweghị mmasị. Àgwà niile nke ọnụ ahịa a bụ nkọwa zuru ezu ugbu a.
1 Gionee F9 Plus Atụmatụ na nkọwa
Gionee F9 Plus Atụmatụ na nkọwa
Ikwu okwu na ihuenyo nke ngwaọrụ a nwere. Ọ na-etu ọnụ maka a 6.26-inch diagonal nke kpuchiri ya na Dragontrail Glass ma nwee akụkụ 19: 9. N'aka nke ya, ọ na-enye mkpebi HD + nke pikselụ 1,520 x 1720 nke a chịkọtara na usoro 19: 9 dị na mbụ. A kwadebere ya na ọkwa dị ka mmiri mmiri, nke ọ nwere ihe mmetụta 13 MP n'ihu ihu ya na oghere f / 2.0 na AI. Dabere na sistemụ foto dị n'azụ, ọ nwere igwefoto abụọ nke 13 na 2 MP nwere ọdịiche dị iche nke f / 1.8 na f / 2.4. Ha na-enye onodu ihe osise doro anya, yana ọnọdụ abalị na ịchọ mma AI.
Ihe nhazi octa-core 1.65GHz bụ ihe dị n'okpuru mkpuchi. Iji soro ya, 3GB RAM yana 32GB nke nchekwa dị n'ime ya bụ ihe dị ya mma. Batrị ikike 4,050 mAh na-ekwukwa "ugbu a", dị ka sistemụ arụmọrụ gam akporo. Dabere na ọrụ na atụmatụ ndị ọzọ, ọ nwere ọdụ ụgbọ mmiri microUSB, onye na-agụ akwụkwọ mkpịsị aka azụ, njikọta ihe ọdịyo, nkwado maka Dual VoLTE, 2.4 GHz Wi-Fi, GPS, A-GPS na Bluetooth.
Gionee F9 Plus dị ọnụ na Rs 7,690 (~ € 97 ma ọ bụ $ 108) na India. E mepela ya naanị na mba ahụ, ya mere amabeghị ma ọ ga-adị na mpaghara ndị ọzọ n'ọdịnihu dị nso ma ọ bụ n'ọdịnihu dị anya. N'oge ahụ, ọ dịghị maka ịzụta, mana ọ ga-abụ na ụbọchị ndị na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gionee F9 Plus, ekwentị ọhụrụ dị ala nke nwere ọnụ ahịa dị egwu